रेशम मार्गको पुनर्कल्पनामा नेपाल – Puleso
रेशम मार्गको पुनर्कल्पनामा नेपाल
By:puleso Published Date: सोमवार, बैशाख ३१, २०७५
चीनबाट शुरू भएको ऐतिहासिक रेशम मार्ग अर्थात् सिल्क रोडको पुनर्कल्पनाको रुपमा अहिले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (क्षेत्र र मार्गको पहल) थालिएको छ । सिल्क रोडले वस्तु, व्यापार, विज्ञान–प्रविधिको आदानप्रदानले चीन र अन्य देशहरुलाई जोडेको थियो भने यसको नयाँ संस्करण वा पुनर्कल्पना राज्यहरुका नीति, पूर्वाधार, व्यापार, लगानी, वित्त र वासिन्दालाई जोड्ने विशाल सञ्जालको रुपमा आएको छ । यो
सञ्जालको हिस्सा हुन नेपाल अहिले सहमत भइसकेको छ।
के हो ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ?
सन् २०१३ मा चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले क्षेत्र र मार्गको पहलसम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेका हुन् । यो अवधारणाको मूल अन्तरवस्तु चीनलाई युरोप, एशिया र अफ्रिकासँग जोड्ने अन्तरमहादेशीय मार्गहरुको सञ्जाल हो । त्यसका साथै चीनका बन्दरगाहहरुलाई दक्षिण–पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य–पूर्व र अफ्रिकाका बन्दरगाहहरुसँग जोड्ने २१ औं शताब्दीको सामुद्रिक मार्गको सञ्जाल पनि यसको अर्को पाटो हो । यस्तो विशाल अन्तरमहाद्वीपीय सञ्जालको परिकल्पना अहिलेसम्म संसारमा गरिएकै थिएन । यस्तो पहल गर्नुमा चीनका आफ्नै कारण छन् ।
पहिलो, विगत २५–३० वर्षमा चीनमा भएको ८–१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर बाह्य मागमा आधारित थियो । संसारभर आएको आर्थिक मन्दीका कारण वस्तुहरुको माग घट्दै गएपछि आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्नु पनि चीनका लागि चुनौतीपूर्ण हुनपुग्यो र वृद्धिदर थेग्ने उपायहरुको खोजी आवश्यक हुन पुग्यो ।
दोस्रो, बाह्य मागअनुसार उत्पादन बढाउँदै जाँदा चीनको उत्पादन क्षमता यति बढ्यो कि त्यो अतिरिक्त क्षमता उपयोग गर्ने नयाँ क्षेत्र खोज्नु पर्ने भयो ।
तेश्रो, चीनभित्रै पनि पूर्वी तटीय क्षेत्रको विकास तीब्र भयो भने स्रोतसाधन सम्पन्न तर जनसंख्या कम भएका मध्य र पश्चिम चीनका क्षेत्रहरु विकासमा पछि परे । फलःस्वरुप ठूलो प्रादेशिक र क्षेत्रीय असमानता तथा विभेद देखाप¥यो । चौथो, विकासको नयाँ चरणमा जान नयाँ उच्च मूल्य अभिवृद्धि निहित वस्तु उत्पादन गर्न चाहिने स्र ोतसाधन भएका आन्तरिक र छिमेकका क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुपर्ने चुनौति देखियो । पाँचौं, विकासका नयाँ सन्दर्भमा क्षेत्रीय र विश्व बजारका साथै वित्त बजारसँग कसरी जोडिने, एकीकृत हुने र फाइदा लिने भन्ने प्रश्न पनि खडा भयो ।
यी सबै सन्दर्भमा चीनियाहँरुले बुझे– आफू मात्र समृद्ध भएर आर्थिक विकास दिगो हने रहेनछ, बरू समग्र क्षेत्र नै समृद्ध भएन भने आफ्नो समृद्धिसमेत सधैँ जोखिममा पर्दो रहेछ । यसका निम्ति जोडिनसक्ने देशहरुसगँ श्रोत–सपंदाको परिचालन र पारस्परिक लाभ र बजार सुनिश्चित गर्ने रणनीति अपनाउनु आवश्यक भयो । आर्थिक विकाससगँ राजनीति र सुरक्षाको प्रश्न पनि जोडिएर आउने भएकोले आफ्नो सञ्जालमा अरूलाईजोड्नु चीनको आवश्यकता बन्यो । विश्वको महाशक्ति राष्ट्र हुने चीनको आकाक्ष्ाांको यो महङ्खवपूर्ण रणनीतिक पहल पनि हो ।
यसका मूल पाँच वटा उद्देश्यहरु छन् । पहिलो आवद्ध देशहरुसँग सडक, रेल, जलमार्ग, हवाईमार्ग, सञ्चार, ऊर्जा प्रसारण, हाइस्पिड इन्टरनेटलगायतको मल्टिमोडल कनेक्टिभिटीको सञ्जाललाई बिस्तार गर्ने । दोस्रो, निर्वाध व्यापार बढाउनका लागि आइपर्ने अवरोध हटाउने । तेस्रो, वित्तीय संस्थाहरुबीचमा वित्तीय कारोबारलाई एकीकरण र सहजीकरण गर्ने ।
चौथो, देशहरुका बीचमा नीतिगत समन्वय कायम गर्ने । पाँचौ, जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने । हालसम्म क्षेत्र र मार्गको पहलमा झण्डै ६० वटा देशलाई आवद्ध गर्ने सोच छ । यसका निम्ति आवश्यक वित्तीय श्रोतको व्यबस्थापनको पहल पनि चीनले गरेको छ ।
कनेक्टिभिटीमा नेपाल कता ?
नेपाल हुँदै चीन र भारत जोड्नु नै मुख्य अभिप्राय भए पनि नेपालमा कस्तो मार्गको सञ्जाल कहाबाँट जोड्ने भन्ने निर्णय गर्ने नेपालले हो । अहिले केरुङ्बाट आउने सडकै छ भने अर्को प्रस्तावित किमाथाङ्काबाट धनकुटा–धरान जोड्ने सडक हो । भविष्यमा कोरला नाकाबाट मध्य भाग जोड्ने पनि हुनसक्छ । त्यस्तै रेलमार्गबाट केरुङ, काठमाडौ र अन्य शहर जोड्ने कुरा पनि छ ।
क्षेत्र र मार्गको यो सोच विभिन्न कारणले गर्दा नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ । पहिलो, यसले चीन र भारतको दुई ठूला बजारलाई जोड्छ र हामी त्यसको बीचमा स्थलीय पुलको काम गर्छौं ।
दोस्रो, यसले चीनका सुदूर पहाडी भागहरुको विकासलाई सघाउँछ । हाम्रो पहाडी भागको विकासका लागि परस्पर सिक्नुपर्ने धेरै पक्षहरु छन् ।
तेस्रो, विद्यमान तुलनात्मक लाभको क्षेत्रबाट फाइदा लिन र नयाँ तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको पहिचान र विकास गर्नमा यो पहलको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो सञ्जालको विस्तारसँगै हामीसँग भएको जलस्रोत खनिज, जडिबुटी, कृषिलगायतका क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ।
चौथो, हिमालय र तिब्बत वातावरणीय दृष्टिले संसारकै संवेदनशील र जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र हुन् । तसर्थ यी क्षेत्रकोविकास गर्दा आर्थिक विकास र स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने मात्र नभई वातावरणको संरक्षणमा यथेष्ट ध्यान दिने विकासको नयाँ प्रकारको सोच चाहिन्छ ।
पाँचौ, अहिले नेपालको व्यापार तथा पारवहन भारतमा मात्र आश्रित छ । तर, क्षेत्र र मार्गले हाम्रो विकल्पलाई चीन र भारत दुवैतिर विस्तारित गरिदिन्छ ।
यसका साथै यसले क्षेत्रीय समझदारी र शान्ति स्थापनामा पनि योगदान गर्छ । व्यापारिक, सांस्कृतिक लगायतका सम्बन्धहरु नजिकिँदै जाँदा आपसी विश्वास बढ्दै जान्छ । विश्वास बढेपछि आपसी सुरक्षा नीति पनि समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्छ र चुनौतिहरुसँग जुझ्न पनि सहज हुन्छ भन्ने चीनियाँ बुझाइ छ ।